Public Health Concern नया थप भएको खोप : रोटा खोप सम्बन्धि पूर्ण जानकारी एकै ठाउँमा / – Public Health Concern
रोटा भाइरसबाट हुने पखलाको अवस्था र खोप शुरुवातको औचत्यि तथा रोटा भाइरस पखलाबारे जानकारी :
रोगजन्य महामारी प्रवृती – विश्वको अवस्था – विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार विश्वमा ५ वर्षमुनिका बच्चाहरुमा हुने कुल मृत्यु मध्य अहिले पनि ८ प्रतिशत मृत्यु पखलाबाट हुने गरेको छ ।पखालाको कारणवाट हुने कुल मृत्यु मध्येमा एक तिहाई मृत्यु रोटा भाईरसको कारणवाट हुने गरेको छ । त्यसैगरी बर्सेनी झण्डै २० लाख मानिसहरु रोटा भाईरस संक्रमणको कारण अस्पतालमा भर्ना हुने गरेको देखिन्छ र विगतको तथ्याकंहरु हेर्दा रोटा भाईरस संक्रमणको कारण बर्षेनी विश्वभर २१५,००० वालवालिकाको मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ (WHO 2013 )
रोगजन्य महामारी प्रवृती – नेपालको अवस्था – HMIS को तथ्यांक अनुसार पखालाका नयाँ रोगी वार्षिक प्रति १००० सरदर ३८५ देखि ४२२ हुने गरेको छ (आ.ब ०७४।७५)। उक्त रोगी मध्ये प्रति एकलाख ७ देखि १३ जना (०.०७-०.१३/१०००) मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा ५ वर्ष मुनिका ११ लाख भन्दा धेरै बच्चाहरुलाई पखाला लाग्ने गरेको छ । झाडापखालाको कारण अस्पताल भर्ना हुने ५ वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये ३०% बच्चाहरुमा रोटा भाईरसको कारणबाट हुने पखला भएको देखिन्छ ।
रोटा खोप शुरुवातको औचित्य
– अन्तराष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको उद्देश्य तथा वहुवर्षिय खोप कार्य योजना (सन् २०१७-२०२१) को लक्ष्य अनुसार नयाँ खोप तथा प्रयोगमा आईरहेका अन्य खोपहरु राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा क्रमशः थप्दै जाने सो नीति अनुरुप रोटा भाईरसले गराउने पखालावाट वालवालिकालाई वचाउन आ.व. २०७५/०७६ बाट नियमित खोप सेवा मार्फत रोटा खोप शुरुवात गर्ने निणर्य भएको हो ।
रोटा खोपको परिचय
– यो खोप निस्कृय पारिएको जिवित विषाणु (Live Attenuated) वाट तयार गरिएको सफा झोल (Colorless) को रुपमा आउँछ । यो खोप एक प्याकमा ५ वटा प्लास्टिकको ट्युबमा हुन्छ । एक वच्चाको लागि एक मात्रा (१ ट्युब) मात्र दिइन्छ ।
नेपालमा हाल च्यतबचष्ह नामको खोप प्रयोगमा ल्याईएको छ । सन् २००६ देखि हाल सम्म विश्वका ९० भन्दा बढि देशहरुमा रोटाभाइरस खोप संचालनमा छ । अन्य खोपझै यो खोप पनि अत्यन्त सुरक्षित र प्रभावकारी छ ।
बनावट र मात्रा
खोपको प्याकिङ्गमा ५ वटा ट्युवहरु एउटै प्याकमा आउछ । उक्त प्याकिङ्गबाट एउटा ट्यूव छुटाएर एउटा बच्चालाई पुरै मात्र खुवाउनु पर्छ ।
प्रत्येक ट्युवमा १.५ एम.एल खोप रहेको हुन्छ :- (1 packing =5 tubes, 1 tube = 1 dose; 1 dose = 1.5ml liquid)
रोटा भाइरस खोप Freeze Sensitive खोप हो, त्यसैले खोपलाई जम्न दिनु हुन्न ।
यो खोप जहिले पनि +२ देखि +८ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्दछ ।
यदि खोप जम्न गएमा प्रयोग गर्नु हुदैन ।
मात्रा र खोप दिने उमेर
यो खोप ६ हप्ता र १० हप्ताको उमेरमा (ओ.पी.भी. तथा पेन्टाको पहिलो र दोस्रो मात्रा सँगै) दिने प्रत्येक बच्चाको लागि एक मात्राको प्लास्टिक ट्युव हुन्छ, त्यो ट्युवमा भएको सवै मात्रा (करिव १.५ एम.एल) खुवाउनु पर्दछ ।
यो खोप दिंदा दुई मात्राको बिचमा कम्तिमा चार हप्ताको फरक हुनु पर्दछ ।
नोटः यदी रोटा खोप लगाउन तालिका अनुसार नआएमा २४ महिना भित्रमा १र१ महिनाको फरकमा दुबै मात्रा दिने तर २४ महिना पछाडी कदापि दिनु हुँदैन ।
खोपको हुन सक्ने असर
यो खोप लगाएपछि केही वच्चालाई सामान्य पखाला तथा पेटको गडवडी (क्ष्चचष्तबदष्ष्तिथ)हुन सक्छ ।यो खोप लिएको प्रति एक लाख वच्चाहरु मध्ये १ वा २ जना सम्ममा आन्ध्रा खस्ने (Intussusceptions )हुने भनिएको भएतापनि हालसालै अफ्रिकाका ७ बटा देशहरुमा गरिएको यस खोप Rotarix को अध्ययनले यस्तो जोखिम नभएको पाइएको छ ।
खोप दिन नहुने अवस्थाहरु
पहिलो मात्रा रोटा भाइरस खोप दिंदा Hypersensitivity भएमा दोश्रो मात्रा नदिने ।
बच्चामा यो भन्दा अघिआन्ध्रा खस्ने ( Intussusceptions ) भएको थाहा भएमा ।
बच्चालाइ तारन्तार पखाला वा बान्ता भइरहेको अबस्था भएमा ।
रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिमा कुनै खराबी भएको (इम्युनोडेफसेन्सी) थाहा भएमा, जस्तैः एड्स भएको अवस्था ।
रोटा भाईरस खोप खुवाउने विधि र प्रक्रिया
एक एक मात्राको रोटा खोपको पाँचवटा ट्युब सँगै रहेको हुन्छ ।
पाँच मात्राको प्याकिङ्गबाट १ मात्राको ट्युब निकाल्नको लागी ट्युबलाई हल्का दाँया तिर तान्नुहोस् ।
त्यसपछि ट्युबलाई हल्का दाँया तिर घुमाउनुहोस् र  त्यसपछि ट्युबलाई हल्का तल तिर तान्नुुहोस् ।
अब बच्चालाई तल दिएको प्रक्रिया अनुसार मुखबाट रोटा खोप खुवाउनुहोस् ।
यसपछि ट्युबलाई हल्का दाँया तिर घुमाउनुहोस् र
त्यसपछि ट्युबलाई हल्का तल तिर तान्नुुहोस्
खोप दिने माध्यम र तरिका
यो खोप मुखवाट खुवाईन्छ ।
यो खोप दिंदा पोलीयो थोपा जस्तै मुखमा थोपा खुवाउन गालाको भित्री भागमा ट्यूवको टुप्पो लगि विस्तारै सवै खोप निचोरेर दिनुपर्दछ ।
यो खोप सँगै उक्त दिन अन्य खोप तथा सुईहरु पनि दिनुपर्ने भएमा पहिला रोटा र पोलियो थोपा मुखवाट खुवाई सकेपछि मात्र सुईवाट दिने अन्य खोपहरु दिनुपर्दछ ।
याद गर्नुपर्ने कुराः
– यो खोप सामान्य विरामी, कुपोषण, एच.आई.भी. भएको अवस्था र एचभ (mबतगचभ वच्चालाई दिन सकिन्छ । प्रत्येक वच्चालाई ६ र १० हप्ताको उमेरमा २ मात्रा रोटा भाइरस खोप नछुटाई खुवाउनु पर्दछ । झाडा वान्ता भएको अवस्थामा यो खोप नदिने तर सन्चो भएपछि नछुटाई खुवाउनु पर्छ ।
रोटा भाईरस खोप खुवाउने तरिका :
खोप दिनुपूर्व खोप दिने स्वास्थ्यकर्मीले साबुनपानीले मिचिमिचि हात धुनु पर्दछ ।
खोप दिनु भन्दा अघि बच्चालाई आमाले काखमा तेर्सो पारेर (Semi Reclining Position) मा राख्न लगाउनुहोस् ।
बच्चाको गालामा हल्का दबाएर बच्चाको मुख खोल्नुहोस् ।
बच्चाकोगालाको कुुनाबाट भित्री भागमा पर्ने गरी ट्युबलाई छड्के पारि मुख भित्र राख्नुहोस् ।
अब विस्तारै ट्युबलाई निचर्दै जानुहोस् र बच्चाले निलेको सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
चिउँडोलाई हातले अड्याउनुहोस् र निल्नमा मद्दत गर्नुहोस् ।
के भएमा तुरुन्तै आउने र
धेरै (उच्च ज्वरो आएमा )बच्चाले खान दुध चुस्न कम गरेमाबच्चा ३—४ घण्टा भन्दा धेरै समय सम्म रोई रहेमासुई लगाएको स्थानबाट रगत बगीरहेमा
बच्चामा कुनै असामान्य चिन्ह लक्षण देखापरेमा (जस्तै कम्पन)
खोप परिमाण अनुमान गर्ने तरिका
लक्षित जनसंख्या वा विगत बर्षहरुको सरदर मासिक प्रगति (जुन धेरै हुन्छ) २ मात्रा १.०५
(५% खेरजानेदरको आधारमा) ले गुणन गर्ने ।
तर कार्यक्रम शुरु भएको महिना, १ मात्रा मात्र माग गर्नु पर्दछ भने दोश्रो महिना देखि विगतको पहिलो मात्रा र मासिक आवश्यकताको आधारमा दुवै मात्रा माग गर्नु पर्दछ ।
परामर्श गर्दा भन्नै पर्ने मुख्य सन्देशहरु
दिएको खोप, मात्रा र महत्व (बचाउने रोगहरु)
खोप लगाए पछि हुन सक्ने सामान्य असरहरु
फेरि आउनु पर्ने मिति, समय र पटक (बांकी खोपहरु)
कार्डको प्रयोग, उपयोगिता र हिफाजत
श्रोत : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय /